Kuyini umuthi ezifana "Lorakson 500"? Yokusetshenziswa, izici ithuluzi, kanye inkomba yayo, ukuma, ukwakheka kanye analogs zichaziwe ngezansi.
Okufakiwe, ukuma, yokwakheka izidakamizwa
Yini ukuma sici ngoba imithi kubhekwe? Yini le nkokhelo uthi imfundo manual? "Lorakson" kuyinto powder crystalline elimhlophe noma kancane aphuzi, senzelwe ukulungiswa isixazululo emthanjeni noma esicutshini. Ukwakheka nomuthi kuhlanganisa isithako esebenzayo ezifana ceftriaxone. It is ethulwa ngesimo sodium yayo usawoti.
Futhi, lesi sidakamizwa "Lorakson" imfundo manual okuyinto kuqukethwe isitaki amakhadibhodi kuhlanganisa kuphela njengoba amanzi umjovo.
Ukulungiswa isihloko ikhiqizwa ingilazi izitsha eziyisikhombisa 10 ml okuyinto ezibekwe amabhokisi iphepha (engase ithengiswe noma ngaphandle kuphela).
Imithi Pharmaceutical Imikhiqizo
Uyini izidakamizwa eziphawulwe ngenhla okunzima? Yiluphi ulwazi siqukethe imiyalo ephathelene nokusetshenziswa? "Lorakson" - i-antibiotic (cephalosporin) esizukulwane sesithathu, senzelwe abaphathi parenteral. It has isinyathelo amagciwane.
With ikhono zivimbela synthesis cell ulwelwesi zomuthi sivimbela ukukhula kwama- nezilwanyana ezincane kunazo Gram-negative futhi Gram-HIV.
Ngokusho ochwepheshe, ceftriaxone libonisa ukuzinza ethile ngokumelene beta-lactamase (penicillinase, cephalosporinase), okuyinto akhiqizwa amagciwane kakhulu.
Indlela Yokuphatha le lisakazeka umkhiqizo emzimbeni womuntu? Yini lokhu kusho imiyalelo elikulesi sihloko ukusetshenziswa? "Lorakson" ku ekuphathweni parenteral kahle ku cishe zonke izicubu lomzimba.
Nge ukumnika emthanjeni of ceftriaxone pretty masinyane lisabalalisa ku uketshezi interstitial, lapho impahla yayo elwa namagciwane ayagcinwa usuku lonke.
Kumele kuqashelwe futhi ukuthi ingxenye esebenzayo ye-ejenti reversibly nakanjani-albumin. Ngenxa okuqukethwe encane yokugcina oketshezini interstitial, lokuhlushwa izidakamizwa ke kancane kunaleyo serum.
Yimaphi isidakamizwa lisuselwa isiguli? Elikushoyo ngakho yokusetshenziswa? "Lorakson» kabani sokuqanjiwe okuxoxwe ngazo ngenhla, uboniswa amahora ayi-8 (kanye Bile futhi umchamo). Kufanele kuphawulwe ukuthi ngaphansi kwethonya izitshalo emathunjini i-elementi asebenzayo ithuluzi uguqulwa i metabolite esingasebenzi.
Ngo ezisanda kuzalwa, nengxenye-ukuphila kubhekwa izidakamizwa izinsuku 8, futhi kwasebekhulile (engaphezu kwengu-70), le nkathi ngaphezulu izikhathi 2.
I kinetics izidakamizwa ezimweni ezikhethekile
Lapho eziyimbangela yezinkinga ezizuzwa system kwezinso futhi pathologies kwesibindi ngo omdala abantu lo pharmacokinetics ka ceftriaxone kuyinto injalo ingashintshile, inkathi isigamu-ukuphila is yinde alibalulekile.
Lapho umsebenzi izinso ifakwa ebucayini kakhulu, ukuqedwa izidakamizwa senzeka ngokuyinhloko Bile, kodwa futhi uma elimele isibindi, ceftriaxone etholakala ikakhulukazi nge nezinso.
Ngo izinsana nezingane ezincane nge yisishiso meninges lokhu nomuthi ukungena i-cerebrospinal fluid. Ngo abadala nge-meningitis ngemuva kwamahora 5-25 ngemva kokuphathwa ngesikhathi umthamo ceftriaxone 50 mg / kg esisindo izikhathi eziningana lokuhlushwa yayo idlula MIC, edingekayo ukuze baqedwe-bacterium okuyinto abangela izifo.
Kunini lapho kufanele ngithinte ukwenzani umjovo izidakamizwa "Lorakson 500"? Yokusetshenziswa (imijovo kufanele banikwe kuphela udokotela abanolwazi) uthi isidakamizwa yakhelwe ukwelapha izifo ezithathelwanayo kanye ukuvuvukala ezibangelwa amagciwane ebucayi emuthini. Ngakho, it is ngenkuthalo esetshenziswa:
izifo of eliphezulu ipheshana zokuphefumula;
pheshana urinary nezifo nezinso;
izifo uhlelo zokuzala (kuhlanganise isipatsholo);
izifo besisu (kuhlanganise Izifo ukuvuvukala emathunjini, peritonitis, biliary ipheshana isifo);
izifo yaleli pheshana zokuphefumula (kuhlanganise i-pneumonia);
izifo, izicubu ngokuhlanganyela kanye bone;
izifo kubantu abanegciwane amasosha omzimba kwehlisa.
Futhi, izindlela eziningi zingabhekwa njengezincwadi ezinhle wabonisa nokuvimbela izilonda ezithathelwanayo esikhathini postoperative.
Ingabe kukhona Izimo izidakamizwa eziphawulwe ngenhla okunzima? Elikushoyo kusenza imiyalelo ohambisana ukusetshenziswa? "Lorakson" izinkomba okuye engenhla, akufanele ebekiwe kulezi zimo ezilandelayo:
nesineke hypersensitivity kuya penicillins futhi cephalosporins;
e senyanga yokuqala sokukhulelwa.
Nge yisixwayiso lesi imithi Kunconywa abantu isifo sesibindi, nesifo futhi enteritis. Futhi, ngokuqapha kufanele lisetshenziswe uma NUC, hyperbilirubinemia ku izinsana eminyakeni emibili trimesters sokukhulelwa, ababelethwa kungakafiki isikhathi futhi ibele.
"Lorakson" iqondiswa iziguli ngemithambo yegazi noma intramuscularly. Isilinganiso umthamo nsuku zonke zomuthi abadala futhi izingane ezineminyaka engu-12 ubudala kuyinto 1-2 g kanye nsuku zonke (njalo ngemva kwamahora angu-24).
Ezimweni ezimbi kakhulu, kanye nezifo ezibangwa amagciwane ngokulinganisela ebucayi, umthamo wansuku zonke le-ejenti kungase kukhule ku 4 g
izingane ezisanda kuzalwa ekusebenziseni izidakamizwa 1 isikhathi ngelanga Kunconywa umthamo ezilandelayo: 20-50 mg / kg (kufika ku 2 amaviki ubudala).
Baby izingane nezingane iminyaka engu-12, umthamo ngelanga kufanele kube 20-75 mg / kg. Izingane Ezisathomba nge esisindo 50 kg nomuthi imithamo yaphathwa abadala.
Ubude yokwelashwa ngokwenza kuncike isifo.
Imigomo ukulungiselela izixazululo
Indlela ukulungiselela isixazululo izidakamizwa? Yini le nkokhelo uthi imfundo manual? "Lorakson" ifomu ukukhululwa okuyinto seyenziwe phezulu, ngoba ujove esicutshini kufanele buhlanjululwe (1 g) e 3.5 ml 1% - isixazululo lidocaine, bese ufaka shí imisipha gluteal.
Ukuze kulungiswe ekwakhiweni ngoba umjovo emthanjeni, 1 g powder kufanele buhlanjululwe in 10 ml amanzi distilled (oyinyumba). Isixazululo sokugcina kumele kancane busuka umthambo (imizuzu 4).
Ukuze ukumnika emthanjeni of 2 g zomuthi okudingekayo ukuncibilikisa 40 ml isixazululo (isib i-sodium chloride, dextrose noma fructose), mahhala kusuka calcium. Lokhu ukumnika kufanele kwenziwe okungenani isigamu sehora.
Ingabe abantu basabele ngendlela embi ikhambi izidakamizwa "Lorakson"? Yokusetshenziswa (imijovo kufanele kwenziwe kuphela isibhedlela) uveza ukuthi esimeningcondvo usebenzisa le imithi isiguli singase ukuthuthukisa:
isicanucanu, leukopenia nokuhlanza, granulocytopenia, uhudo, hypocoagulation, ukuqunjelwa, anaemia hemolytic, ukubuyisa, lymphopenia;
Ubuhlungu obukhulu besisu, phlebitis, ukunambitheka nasiphazamiso, kodwa ubuhlungu kanye vein, stomatitis, urticaria, glossitis, neutropenia;
enterocolitis pseudomembranous, kokuziphatha nesisa endaweni ekuphathweni esicutshini, kahle isibindi umsebenzi;
kahle umsebenzi kwezinso, goiter, thrombocytosis, glycosuria, thrombocytopenia, oliguria, amawala, azotemia, bronchospasm;
ukwanda urea egazini, eosinophilia, hypercreatininemia, erythema polymorphic, cylinduria, epistaxis, hematuria, superinfection, anuria;
imfiva, ukugula serum, imfiva, angioedema, pruritus, isiyezi, ukushaqeka anaphylactic, candidiasis, ikhanda.
Cooperation futhi amacala ukweqisa izidakamizwa
Overdose izimali kubonakala isiyezi, ubuhlungu bekhanda, paresthesia, Ukudlikizela, encephalopathy futhi equlekile. Ukuqeda lezi zenzakalo zisebenza ukwelashwa lingaze, futhi usekela imisebenzi ebalulekile zomzimba.
ukwelashwa Ngesikhathi ceftriaxone nge aminoglycosides kwandisa umsebenzi wabo elwa namagciwane. Ukuze uvimbele umphumela anobuthi kwala magciwane iphathwa ngezikhathi ezihlukene futhi ezindaweni ezahlukene.
Njengoba isetshenziswe "Loraksona" Platelet wokuhlanganisa inhibitor futhi ama-NSAID kunobungozi okusezingeni eliphezulu ebangela ukopha.
Uma uthola "loop" isisu, kunobungozi olukhulu nephrotoxicity.
Okubukwe imithi ayihambisani ne-ethanol, njengoba le nhlanganisela kubangela nesicanucanu esibi, izinhlungu zibe esifundeni epigastric, ukuhlanza, siwasebenzise, ukuncishiswa of wegazi kanye tachycardia.
It is nhlobo uthayiphe esisodwa isipetu ceftriaxone nezinye elwa namagciwane.
izidakamizwa Okufanayo nempendulo imithi
Manje uyazi ukuthi "Lorakson". Yokusetshenziswa, kusho analogs kuthiwa okuxoxwe ngazo kulesi sihloko.
Yini esikhundleni imithi? Ukuze izidakamizwa ezifanayo ochwepheshe cabangela lokhu okulandelayo: "Ceftriaxone-Promed" "Ceftriaxone-Elf," "Tsefogram", "Tsefson" "Ceftriaxone-Protekh" "Ceftriaxone-Dzhodas", "Tseftriabol", "Tsefatrin".
Ngokusho izimpendulo iziguli, avame liphathelene izindlela baye asetshenziselwa ukwelapha engenhla izifo zokuphefumula futhi zokuphefumula ipheshana izifo. Ukuhlaziya imiyalezo yabo, singaphetha kahle ukusebenza kwawo okusheshayo nekghono eliphezulu. Kufanele kuphawulwe ukuthi uma usebenzisa lokhu izidakamizwa kwezinye iziguli kwakukhona kabi imithi emzimbeni okungatheni ezazingeke zidinge ukuba ukuqedwa yokwelapha.
Eleutherococcus: izakhiwo ewusizo kanye contraindications kwabesifazane. Eleutherococcus: izakhiwo zokwelapha kanye contraindications ngoba amadoda
"Levofloxacin": khumbula, incazelo lokulungisela yokusetshenziswa
Wamafutha for herpes. Okungaphezu kokususa ukugula
USuku International of Ikhutshaziwe Abantu: umcimbi
Amafasitela Plastic e Kherson - Izinzuzo Ukufaka futhi Ukusebenzisa
Ukutshala utshani ngezandla zakhe - umsebenti loyinhloko
Aquario - futha umsebenzi ozinzile. Buyekeza kanye nokubuyekeza
Amazing wobuciko osesikhundleni origami yimali
Goinf.ru - indlela ukususa ogaxekile?
I "Uvuko" - uthando akugcini
Ingabe sembabazane esesikhathini?